Malunga nathi -Yueqing Aiso Electric Co., Ltd.
Umthengisi wakho weZinto zoMbane oBalaseleyo
I-AISO Electric ngumboneleli ngobuchule wezixhobo zombane ezithunyelwa ngaphandle. Iimveliso ezithunyelwa ngaphandle zibandakanya: Gqibezela iSeti yezixhobo, izixhobo zombane eziphezulu, izixhobo zombane ezisezantsi kunye neziguquli. Sineefektri ezi-3, zonke iimveliso ziveliswa ngokungqongqo ngokungqinelana nemigangatho ye-ISO9001 kunye neye-CE.
Inkampani inamava angaphezulu kweminyaka eli-10 yamava okuthumela ngaphandle, kwaye ithengisiwe kumazwe angaphezu kwama-50. Iimveliso ezininzi zisetyenziswe ngaphezulu kweminyaka eli-10 kwaye zamkelwe kakuhle ngabathengi.
Siza kuqhubeka ukuphucula inkqubo yemveliso kunye nobungcali beenkonzo ukubonelela ngeemveliso ezingcono kunye neenkonzo.
1. Umgangatho ngowokuqala, inkcubeko yethu.
2. "Unathi imali yakho ikhuselekile" imbuyekezo epheleleyo kwimeko ezimbi hayi ngokungqinelana neemfuno zobugcisa okanye ukulibaziseka ixesha lokuhanjiswa.
3. "Ixesha liyigolide" kuwe nakuthi, sinomsebenzi weqela elinobuchule elinokuthi lenze ukulingana okungcono ngexesha elifutshane.
Sinobutyebi bamava kwimveliso nakwezentengiso, sijolise kwimveliso yezixhobo zombane eziphezulu nezisezantsi.Ukongeza, sinendawo elungileyo, kwaye uninzi lwabavelisi banonxibelelwano olusondeleyo, unokubonelela ngezinye iimveliso zombane, kwaye kwiimfuno zakho, iimveliso ezenziwe ngokwezifiso Inkampani yorhwebo eyandayo, abathengi kuyo yonke indawo, benesidima esihle sokufumana ukuthembela kwabathengi ekhaya nakumazwe aphesheya, ukukhuthaza ukuphuculwa kwelizwe lethu, ukukhuthaza ukutshintshiselana kwezoqoqosho kunye netekhnoloji, ukuphucula ubuhlobo kunye abantu bamazwe onke benza umsebenzi omninzi olungileyo. Sinethemba lokuba wena kunye no-1 nisebenza kunye ukudala. Ikamva eliqaqambileyo!